eNasha.com - नाङ्गी पेरिसभन्दा ब्रिट्नी खतरनाक !
नाङ्गी पेरिसभन्दा ब्रिट्नी खतरनाक !
इन्टरनेटमा नाङ्गी पेरिस हिल्टन या अरु कोही खोज्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो भए त ठीकै छ तर नाङ्गी ब्रिट्नी स्पेयर खोजिरहनु भएको भए चाहिँ तपाइँ खतरामा पर्न सक्नु हुन्छ !
हालै गरिएको एक अध्ययनअनुसार इन्टरनेटमा खोजिने पेरिस र ब्रिट्नीका नाङ्गा फोटामध्ये अधिकांशले फोटोसँगै खतरनाक भाइरस पनि पठाउन थालेको देखिएको छ । ती साइटले पस्किने लोभलाग्दा फोटासँगै भाइरसले थुप्रै पीसी (पर्सनल कम्प्युटर) धरापमा परेको बताइएको छ ।
यो अध्ययन हालै म्याकफी नामक भाइरस निर्मूल गर्ने सफ्टवेयरले आयोजन गरेको थियो । दर्ुइ हजार तीन सय सबैभन्दा बढी लोकप्रिय खोजिगरिने शब्दमा आधारित अध्ययनमा भाइरसको प्रकोप ज्यादा रहेको र त्यसमा पनि ब्रिट्नीको नाममा अनेक भाइरसहरु विभिन्न इन्टरनेट साइटमा रहेको बताइएको छ ।
त्यसो त केटी होम र टम क्रुजको नाममा लोभ्याउनेहरुको पनि कमी देखिएन । इअनलाइनका अनुसार यस्ता भाइरसवाला साइटहरु जसले नाङ्गा फोटाको लोभ देखाउँछन्, तिनले चाहिने सूचना र फोटा चाहिँ उपलब्ध गराउने गरेका छैनन् । कतिसम्म भने ती साइटले अझै पनि ब्राड पिट र जेनिफर एनिस्टनका सूचनाभन्दा माथि अपडेट गर्दैनन् । ब्राड पिट र एन्जोलिनाले तहल्का मच्चाइसक्दा पनि सूचना चाहिँ जेनिफरकै बारेमा ती भाइरसवालाहरुले राखेको पाइएको अध्ययनले बताएको छ ।